​१ लाख १७ हजारलाई पहिलो चरणको राष्ट्रिय परिचयपत्र
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ। केन्द्रमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमा कार्ड वितरणकालागि आवश्यक सफ्वेयर निर्माणलगायतका काम अगाडि..
​सेनाको कल्याणकारी खातामा दुई अर्ब ७१ करोड थपियो, पुग्यो ३३ अर्ब ६ करोड रुपैया
काठमाडौँ । नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित सैनिक कल्याणकारी कोषको मौज्दात रकम रु ३३ अर्ब छ करोड पुगेको छ। अघिल्लो आवको असार मसान्तसम्ममा कोषको मौज्दात रकम रु ३० अर्ब ३४ करोड ६६ लाख..
नेदरल्यान्ड्ससँग नेपाल सात विकेटले पराजित
काठमाडौँ । विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत नेपाल घरेलु टोली नेदरल्यान्ड्ससँग सात विकेटको विशाल अन्तरले पराजित भएको छ । नेदरल्यान्डको आमस्ट्रडमस्थित भिआरए क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ५०..
अर्थमन्त्री महरालाई डा. बाबुराम भट्टराईका यस्ता छन् पाँच सुझाव
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री एवं नयाँ शक्ति अभियानका नेता डा बावुराम भट्टराईले नयाँ अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पाँचबुदे सुझाव दिएका छन् । पूर्व सहकर्मी महरालाई भट्टराईले कुरा थोरै काम धेरै गर्न..
​​सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १३ सय कर्मचारीलाई जरिवाना
​काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आव २०७२-७३ मा विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका एक हजार तीन जना कर्मचारीलाई जनही पाँच हजार जरिवाना गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा..
फेसबुकले बचायो आत्महत्या गर्न हिँडेकी युवतीको ज्यान
काठमाडौं । धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनरत एक युवती आत्महत्या गर्ने भन्दै बनारस पुगेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट आत्महत्या गर्ने सूचना पाएकै आधारमा..
प्रत्येक गाउँपालिकामा ७० जना कर्मचारी चाहिने
काठमाडौँ । अब बन्ने स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकामा न्यूनतम ७० जना कर्मचारी रहने भएका छन् । स्थनीय तह पुनःसंरचना आयोगले बनाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा ७०..
​प्रम निर्वाचित भएपछि प्रचण्ड निवासमा चिनियाँ राजदूत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लाजिम्पाटस्थित निवासमा पुगेर नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले बधाइ दिएका छन्। नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत यु चुन्ताईले नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई निवासमै पुगेर बधाइ दिएका हुन्।..
​प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जे देखियो................
काठमाडौँ । सरकारबाट बाहिरिएको २० दिनपछि संसद्को तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै सत्ता फेरबदलको राजनीतिक क्रमले मूर्तरुप लिएको छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका..
प्रचण्डको प्रश्न– म अस्थिर नभएको भए माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र केपी ओलीको प्रधानमन्त्री हुने चाहना के हुन्थ्यो ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ९प्रचण्ड९ले आफू अलि अलि अस्थिर नभएको भए एमालेका कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । “रिस उठेको बेला मलाई अस्थिर..
​प्रचण्ड दोश्रो पटक ३६३ मत ल्याई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोश्रो पटक नेपालको ३९ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन्। बुधबार भएको निर्वाचनमा दाहालको पक्षामा ३६३ मत र विपक्षामा २१० मत परेको थियो।..
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा ३० करोड अनुदान पाउने
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउनका लागि नेपालले करिब ३० करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) ले अनुकूलन कार्ययोजना बनाउन नेपाललाई ३० करोड..
​राहदानीबाटै छ अर्ब राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । आव २०७२-७३ मा राहदानीबाट रू ६ अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । राहदानी विभागबाट रू दुई अर्ब ६९ करोड ९४ लाख ४० हजार र कूटनीतिक नियोगबाट रू..
​प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेद्वारी दर्ता, एमालेले उम्मेद्वारी नदिने
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन् । दाहालले बिहान ११ बजे संसद सचिवालयमा उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन् । दाहालको प्रस्तावकमा..
काठमाडौं । प्रहरी नेतृत्वमा बिग्रँदै गएको चेन अफ कमाण्ड त छताछुल्ल नै भइसकेको छ । केही एआईजीपीहरुले आइजीपीको निर्देशन मान्न छाडिसकेका छन् । एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले त प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्ध नै..
सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशद्वारा शपथ ग्रहण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको समुपस्थितिमा शीतलनिवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज आयोजित एक समारोहमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नवनियुक्त न्यायाधीशहरुलाई पद तथा..
नेपाल बैंकले ४ लाख कित्ता नागरिक लगानी कोषको सेयर बेच्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकले बित्तीय अबस्था अरु सुदृढ पार्न आफ्नो स्वामित्वमा रहेको नागरिक लगानी कोषको झण्डै चार लाख कित्ता संस्थापक शेयर लिलाममा निकालेको छ । गत आर्थिक बर्षमा जगेडा कोष धनात्मक..
औषधि उद्योगबाटै लागुऔषध रसायनको कारोबार
काठमाडौं । सन् २०१५ मा नेपालमा २ हजार ५ सय ७५ केजी सिउडोइफेड्रिन नामक सहायक रसायन आयात भएको थियो । रुघाखोकी तथा दमसम्बन्धी औषधि बनाउका लागि औषधि कम्पनीहरूले सो सहायक..
​उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आगामी कार्यकालदेखि वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भएका छन् । एक हप्ताअघि नेपालगन्जमा बसेको महासंघको कार्यसमिति बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको हो..
​डिएफआईडीले सीप विकास कार्यक्रमका लागि चार अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग
काठमाडौँ । संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी)ले रोजगारीका लागि सीप विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४८ करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। सो अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आज अर्थ..
​पूर्व राजपरिवारका जग्गा भाडामा लगाइने
काठमाडौँ । लामो सयमपछि नेपाल ट्रष्ट कार्यालयलाई पूर्व राजपरिवारको नाममा रहेका जग्गा, जमिन तथा घरलाई संरक्षण गर्दै भाडामा लगाई आयआर्जन गर्न बाटो खुला भएको छ। ट्रष्ट स्थापनाको करिब नौ वर्षपछि सो..
​सातदिन भित्र सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहमतिको सरकार गठनका लागि एकसाताको समय तोक्दै आह्वान गरेकी छन् । नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश र सोही संविधानको..
केसीले आज अनसन तोड्ने, सरकारसँग ४ बुँदे सहमति, के–के छ सम्झौतामा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोगसहित चारबुँदे माग राखेर १६ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा। गोविन्द केसी र सरकारबीच आइतबार सम्झौता भएको छ । विवादमा रहेको..
प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा हुँदापनि केपी ओलीको हाइहाइ
काठमाडौं । सत्ताबाट बिदा हुँदा आफ्नो हैसियत बढाएको इतिहास नेपालमा सायदै होला । अहिलेसम्मका हरेक पधानमन्त्री जाने बेला शिर निहु¥याएर सत्ताबाट बाहिरिएका तथ्य राजनीतिक इतिहासले बताइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष..
सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलब सार्वजनिक (प्रहरी, सेना, न्यायसेवा, निजामती समेतको सूची)
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा उल्लेख भए अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नयाँ तलवमान सुविधा मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले वजेटमार्फत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलवमान औसत २५ प्रतिशत बढाएको..
विदेशी पाहुनालाई राख्नको लागि नेपाल ट्रष्टले २५ वटा ‘स्विट’ भवन बनाउने
Posted on Jul 17 2016
काठमाडौँ । नेपाल ट्रष्ट कार्यालयले नेपाल भ्रमण आउने अतिविशिष्ट पाहुनालाई राख्न भवन 'स्विट' निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।नेपाली मौलिक कला र संस्कृतिअनुसार अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न २५ वटा भवन..
​दुई लाख ५० हजार घुस लिँदालिँदै अधिकृत पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र, खजुरा, बाँकेमा कार्यरत् प्राविधिक अधिकृत वीरेन्द्रकुमार यादवलाई घुस लिँदालिँदै शुक्रबार पक्राउ गरेको छ । आयोगको विशेष टोलीले प्राविधिक अधिकृत यादवलाई रु..
जसले पहिलो बनेर इतिहास रचे ! नेपालका ४४ महिलाको सूची
काठमाडौं । मुलुकको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक मुलुकले प्रधानन्यायाधीश महिला पायो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सोमबार औपचारिक रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरिन्। यसअघि पनि नेपाली इतिहासमा पहिलो महिला बनेर कैयौंले आफ्नो..
​सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी निर्णय
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यससँगै ओली सरकार संकटमा गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई दिएको..
​पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हुन ? यस्तो छ जीवनी
काठमाडौं । इतिहास रच्दै सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सोमबार (आज)बाट औपचारिकरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी प्रारम्भ गरेकी छन् । प्रधानन्यायाधीशकारुपमा उनले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथग्रहण गरेकी हुन् । सर्वोच्च अदालतको..
Results 1994: You are at page 45 of 67